बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमीलाई कोरोना संक्रमण, नेकपा नेता एवं पूर्वमन्त्री शर्मा पनि कोरोना संक्रमित « Etajakhabar
काठमाडौ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई दम्पतीलाई कोरोना पुष्टि भएको छ । कोरोनाको शङ्का लागेर स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
डा. भट्टराईले लेखेका छन्,“हिसिला र म दुवैलाई कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भएको छ । कात्तिक ७ गते गरिएको स्वाब परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको हो । चिकित्सकहरुको सल्लाहबमोजिम हामी होम आइसेलनमा नै रहनेछौं । केही समय यता हाम्रो सम्पर्कमा रहनुभएका महानुभावहरु सबैले सतर्कता अपनाउनुहुन विशेष आग्रह छ ।”
त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ । कोरोनाको शङ्का लागेर स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको नेता शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् जानकारी गराएका छन् । शर्माले केही दिनयता आफूसँग सम्पर्कमा आएकाहरुलाई सतर्क रहन र कुनै समस्या देखिएमा कोरोना परीक्षण गरी ढुक्क हुन आग्रहसमेत गरेका छन् ।